Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Chocolate Vegan nke Sensual ọhụrụ
Dị ka ihe ịchọ mma dị oké ọnụ ahịa n'igbe ọla, ọmarịcha ganache pralines Nhiär na-enwu n'ime igbe ha mara mma. Ejiri nlezianya mee ya na ịhụnanya ejiri aka mee ya, candies chocolate na-adabere na ihe ndị dị elu.
Koko nke a na-akụ n'ụzọ anụ ahụ sitere na mkpọda ahịhịa ndụ ahịhịa ndụ nke Andes dị na Peru, na-atọ ụtọ site na mkpụrụ osisi mọnk. Mmiri ara ehi sitere n'osisi sitere na aki oyibo ma ọ bụ oat jikọtara ya na agwa koko bara ụba maka ọdịdị dị nro na enweghị atụ. Enweghị mmiri ara ehi anụmanụ, enweghị shuga a nụchara anụcha, enweghị nnu na-egbochi vegan, ụtọ nke ọma. Ekebere n'otu n'otu ma jiri agba na-egbu egbu nke sitere n'okike chọọ ya mma.
Sarah Anyieth eketala uzommeputa ezi-na-ụlọ ochie nke nwere anwansị anụ ahụ nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ omenala na emume echefu echefu dị na ya. Ntụziaka ahụ agbanweghị ruo mgbe Sarah ji obi ike gaa n'ihu kọwaghachi usoro nchịkọta chocolate nke ọgbọ dị iche iche jisiri ike.
"Ọ na-esiri ike ịchọta chocolate na-enweghị emulsifiers, stabilizers, ngwaahịa mmiri ara ehi, na shuga a nụchara anụcha. Site na Nhiär, anyị na-enye chọkọleti na-atọ ụtọ ugbu a na vegan, ụdị dabere na osisi. Anyị na-enye ọgwụgwọ chocolaty maka ndị maara ahụike chọrọ inye onwe ha ụgwọ ọrụ oge niile, "o kwuru. Sarah na-anya isi n'iji ihe ndị dị n'okike, ndị dị oke mma, ihe ndị sitere n'okike na ndị nwere ụkpụrụ. Ngwaahịa ndị a sitere n'aka ndị na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe na-arụ ọrụ nke ọma na Fair-Trade.
Mmetụta anụ ahụ dị ọcha n'ụdị chọkọletị na-akpalikwa ndị ama ama karịa obodo vegan. Ọbụna ndị omenala chọkọletị siri ike na-eto nka dị ụtọ ma na-anụ ọkụ n'obi gbasara chocolate Nhiär na mgbasa ozi ọha.
A na-ama ụma na-edobe oke ngwaahịa Nhiär dị warara. Sarah na-ebuga ngwaahịa ọhụrụ ejiri aka mee gaa na ndị na-anụ ọkụ n'obi na US, obere igbe nke bonbons chocolate anọ ma ọ bụ nnukwu igbe nke bonbons 24 - onyinye zuru oke maka oge ịhụnanya maka abụọ ma ọ bụ òkù maka mgbede nri abalị mara mma.